Ukuhleka kuyingxenye ebalulekile yokuphila komuntu wonke. Akuyona into engaqondakali ukuthi uhlobo oluhle lwezinhlayiyana ezincwadini nasebucikweni lwazalwa lunye lwezinto zokuqala. Ekuphileni kwansuku zonke, kukhona ukungabi nalutho okuningi okwenza ngezinye izikhathi ufuna ukuphumula futhi uchithe isikhathi ubukele ifilimu enhle eyohleka futhi isize ukulahlekelwa impahla eqoqiwe. Ngakho lolu hlobo lujabulela ukuthandwa okukhulu phakathi kwabenzi befilimu, abavame ukukhiqiza amafilimu amaningi amahle ngonyaka. Kodwa noma yikuphi okushoyo, ababukeli ngamunye banamakholi abo abathandayo, uhlu lwabo lungaba kakhulu. Kodwa-ke, phakathi kwama-comedies kukhona uhlobo olujwayelekile oluqaphelayo lohlobo, ukubukwa okungashiyi muntu onganandaba iminyaka eminingi. Ngezansi uhlu lwamakholi amahle kakhulu kunanoma yisiphi isikhathi.
Yiqiniso, kuyoba namafilimu amaningi aseHollywood ohlwini lwethu, kodwa abaseYurophu bayazi okuningi mayelana nama-comedies. U-Adriano Celentano akasoze abizwe ngokuthi uyindoda enhle, kodwa lokhu kwaqaphela umlingisi we-Italian nomculi omuhle kakhulu wanika amazwe amafilimu amaningi amahle kakhulu. Futhi vumela kusukela ngesikhathi sokukhululwa kwabo sekudlulile kakade kweyodwa eyishumi, kodwa kuze kube manje kubhekwa ukuthi yiwona omnandi kakhulu ama-comedies anjabulo, njenge:
"Madly in Love";
Basabheka umoya owodwa, bephoqa izilaleli ukuba zihleke izinyembezi. Izingcaphuno eziningi ezivela kumafilimu kaChelentano ziye zaba yimaphiko.
I-Old Good France
AmaFrench abonise ngokuphindaphindiwe ukuthi umhlaba ukuhleka ubuciko beqiniso, abawukwazi kahle. Futhi ama-comedies amadala akudala kakhulu kunamanje. Izenzakalo ezingenakufa zikaLouis de Funes endimeni ye-gentlemen uCrucheau, kanye ne "Fantômas" ngokubamba iqhaza kwakhe kugxilile ezinhliziyweni zombukeli emva kokubuka kuqala. Futhi amabhayisikobho noPilbert Richard yizona eziyingqayizivele yohlu lohlobo, lo mculi onolwazi ungazifake emathinini amaningi angenakulinganiswa. Futhi umcabango wakhe nomunye umFulentshi omuhle uGerard Depardieu wayehlelwe ngama-comedies amathathu amahle. Ngakho kunesibopho sokubuka:
"I-blond ende kakhulu esikhwameni esimnyama";
Kodwa ama-comedies aseFrance emashumini eminyaka amuva angakhipha ngokuphepha izigaba ezinhle zakudala. Omunye wabathandekayo nabathandekayo phakathi kwezigidi zababukeli emhlabeni jikelele yi-franchise "Taxi" mayelana nokuzijabulisa okumangalisayo nokumangalisayo kwamangani amabili, umshayeli wetekisi uDaniel kanye nephoyisa u-Emilen. Akukho othandwa kakhulu futhi enye i-franchise, amafilimu omndeni omuhle mayelana nokuzijabulisa okumangalisayo kwe-Asterix no-Obelix ukwenza ukuhleka kuze kube yilapho bonke ababukeli bewela kusuka ezincane kuya ezinkulu. Imisindo emihle yeminyaka yamuva, idutshulwa eFrance, ngenxa yezibuyekezo eziningi zezilaleli - "Amelie" no- "1 + 1". Bheka umoya owodwa:
"Itekisi", "itekisi 2", "itekisi 3", "itekisi 4";
"Asterix and Obelix v. Caesar", "Asterix no-Obelix: Inkonzo yeKleopatra";
«1 + 1 / okungenakuqhathaniswa».
Kodwa-ke, i-Hollywood, njengoba akekho owaziyo ukudubula i-movie ehlekisayo. I- comedy yakudala yaseMelika ingafaneleka ingacatshangwa "Emantombazaneni kuphela e-jazz" noMarilyn Monroe ongafanelwe. Masibe ifilimu emnyama nomhlophe, kodwa kubiza amakhulu embala. Kodwa ukukhiqiza amafilimu ama-comedy ngempela kwakuyi-80s yekhulu lokugcina. I-comedy yocansi ka-1989 "Lapho uHarry Met Sally" ehamba ngisho nohlu lwamafilimu angamakhulu ama-America amahle kakhulu ezinhlobonhlobo zakudala. Ukuphindukuzalwa okumangalisayo kukaDustin Hoffman ku "Tootsie" kusabonakala kumnandi kakhulu, futhi u-Denis DeVito oqhoshayo ku-tape "Abantu abanomusa" baphakamisa imizwa. Eqinisweni, phakathi kwababukeli besithuba seSoviet, uthando olukhethekile luyathandwa yi-Police Academy, eyanyatheliswa ngo-1984 futhi yathola inamba enkulu yezinqubo.
Not funny ingane
Empeleni i-80 iyadlulisa ngempumelelo i-baton yamafilimu akhethekile kuya eminyakeni engu-90. Omunye ngemva kwalokhu kwafika ama-comedies ama-hilarious, uhlu lwawo olungabizwa luhlaba umxhwele. I-movie yomndeni oyintandokazi kunazo zonke eholidini Lonyaka Omusha iwukuthi "Ikhaya Lodwa" iminyaka eminingi, futhi ngokumangalisayo, ukuxabana komfana omncane uKevin kuya kumabutho amabili angenangqondo akukhathazi izilaleli, kodwa kunika imizwelo emihle minyaka yonke futhi kubeka umoya wokuzijabulisa. Kusukela kusigaba esifanayo kanye ne "Izingane Eziyinkimbinkimbi" kuyisinqumo esihle sokubukwa ngumndeni wonke.
I-Symbol of Humor yama-90
Uma sikhuluma ngokuhleka, khona-ke umqondo ofanayo eHollywood uzoba nguJim Carrey ngqo . Ama-comedies amahle kakhulu ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, ngokungangabazeki, cishe wonke amafilimu ngokuhlanganyela kwakhe:
"Ace Ventura: ukucinga izilwane ezifuywayo";
"I-Ace Ventura: Uma Ukubiza Kwemvelo";
"UBruce unamandla onke."
Njengamafilimu amaningi angama-gay alowo minyaka, lezi zihlabelelo azikhathazi, zihlale zifuna ukubuyekezwa futhi ziboniswe ezizukulwaneni ezincane, ukuqoqa wonke umndeni ukubuka ekhaya ngeSonto ngetiyi nezinhlobonhlobo zokudla okudliwayo.
I-thriller yamahlaya iye yaba enye yezintandokazi zohlobo lwababukeli, kuhle kakhulu ukubukela izigcawu ezinhle zesehlakalo, lapho abalingiswa basakwazi ukuhleka khona. Omunye wabamakhosi abahlonishwayo yalolu hlobo kwakunguJackie Chan, ukuzijabulisa kwakhe namaMelika kumane nje kungenangqondo, okwakuboniswa ngokucacile yizinhlobo zamafilimu-franchise "Rush Hour" no "Shanghai Noon". Futhi nangu omunye umbhangqwana ongazange ahluke ukubamba izihambi - lezi yizinhlamvu ze "Men in Black". Amafilimu no-Will Smith noTommy Lee Jones baba yi-hit ngasekupheleni kweminyaka engu-90 futhi baphakamise kahle lezi zinsuku.
Isigaba esikhethekile singabonakala futhi amanye amafilimu, ama-comedies anamahlaya amnyama, okuyinto, nakuba ayathinta izihloko ezibaluleke kakhulu, kodwa futhi angashukumisa abantu kahle. Isibonelo esihle kakhulu somdlalo omnyama yiNew Nine Yards, lapho uBruce Willis ahamba khona indima yomsindisi wesintu, futhi wazama indima yombulali onokuqeda umhlalaphansi. Umphathi we-cinema eccentric u-Quentin Tarantino - isazi esaziwayo emasosheni abamnyama, kanye ne "Pulp Fiction" yakhe kanye ne "Amakamelo Amane" - ubufakazi obengeziwe. Kodwa ama-"Adams Womndeni" angewona amancane ngo-1991 aqine ngokuqinile uthando lwababukeli beminyaka yonke.
Okuhle kakhulu eminyakeni engu-15 edlule
Othandekayo we-2000 umculi - lokhu ngokuqinisekile uBen Stiller, bambalwa abantu abazange babone amafilimu akhe. Ukudlala ngokuhlanganyela kwakhe:
"Ukwazi abazali bakho"
"Umbhangqwana wokubulala: Starsky noHutch,
Lawa mafilimu nabanye abaningi bakhokha ngokunembile isikhathi eside. Yebo, ama-comedies ajabule kakhulu eminyaka yamuva nje ayifanele:
"I-Bachelor Party eVasgas";
Lezi amateyipu ahlukaniswe ngokucacile ngendaba ehle futhi ehlekisayo ngokuhlelwa kweminye eminingi.
Futhi kuthiwani ngeRussia?
Ngokuqondene ne-cinema yasekhaya, umuntu angasho ngokuqinisekile: e-Soviet Union bakwazi ukuhleka, isibonelo - amafilimu amaningi amahle ekhulwini lokugcina, elihlaziywa ngezizukulwane ezingaphezu kwesizukulwane. Le "Ivan Vasilievich ishintsha umsebenzi", "Operation" Y "noma i-Adventures entsha ye-Shurik", "Isiboshwa saseCaucasus", "izihlalo ezingu-12" namanye amafilimu amaningi athandwayo. Bese beqoqa wonke umndeni kusuka esikrinini se-TV. Kodwa i-movie yesimanje yesimanje iyakwenza kahle ngokuwenza "umbukeli ahleke". Mhlawumbe, ama-comedies aseRussia akhululwa ngenani elikhulu kunamafilimu kwanoma yiluphi olunye uhlobo, futhi iningi lazo lifanelwe ukuba ohlwini lwethu. Kodwa eminyakeni engaphezu kwengu-20 edlule baye baphuma kakhulu kangangokuthi akunakwenzeka ukuwabala bonke, futhi kufanelekile ukugqamisa kuphela abadume kakhulu kubo. Isibonelo, ema-90s ekhulu leminyaka elidlule endaweni okwakusemva kweSoviet othandekayo kakhulu yilezi:
"Izici zokuzingela kwezwe";
"Izici zokudoba kuzwelonke."
Zaba ngokoqobo ngamahlaya aseRussia. Eqinisweni, phakathi kwalezi zanamuhla ezibonakalayo:
"Lokho abantu abakhuluma ngakho";
"Intengo" Yonyaka Omusha "»;
"Ukuvakasha Okuphezulu Kokuphepha" nabanye abaningi.
Umncintiswano omuhle wonyaka we-2014 ubude obugcwele "Ikhishi eParis", ukuqhutshwa kocingo oludumile noluthandekayo eRussia uchungechunge, nakuba umncintiswano walo walesi sihloko sodumo kungengaphansi kwefilimu yama-hilarious "Fast Moscow-Russia". Yebo, ngokuvamile, uma umdlalo ukwenza ukuba uhleke izinyembezi, khona-ke ngencazelo yiyona engcono kakhulu!
Ubani owasebenza ku-Geneco ingwenya ye-zoo? Izimpawu zomlingisi
Dominican Republic: izithombe kanye nokubuyekeza mayelana ukuphumula
Iphanorama ezingokomoya nezinhlobo zayo
Ukushintsha CEO kule nkampani: amaqiniso okusheshayo
Nkosi Mount. izintaba Engcwele eJerusalema - iThabori, entabeni ye-Oliva, iZiyoni
Alexander Golts - intatheli ukhumbula impi